I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Renske And Angella
Ifulethi elithokomele elinempahla ephelele engu-2 igumbi lokugezela elingu-1. I-inthanethi yamahhala ye-optic fiber esheshayo engenamkhawulo, ukufinyelela kwe-WiFi, i-TV yekhebula, isidlali seDVD, umshini wokuwasha, amandla okubuyisela emuva, ifulethi lesitezi sokuqala (hhayi phansi) ibanga lokuhamba ukuya ezitolo ezinkulu, izindawo zokudlela, izitolo zekhofi, amaminithi angu-3 ukuhamba ngezinyawo ukuya e-Kabira country club kanye nemizuzu embalwa. hamba ngezinyawo ukuya kwezokuthutha zomphakathi.
Lesi sakhiwo siyisitezi sokuqala esinamakamelo okulala amabili edolobheni laseBukoto eduze komgwaqo uBukoto-kisaasi imizuzu emi-3 ukusuka ku-Kambira country club enawo wonke amabanga okuhamba ngetiyela kuyo yonke into.
Inegumbi lokuhlala elimibalabala elithokomele elinombhede kasofa onethezekile netafula lekhofi elinezihlalo ezengeziwe, indawo yokudlela ehlala ezimbili nendawo yokuzijabulisa enokufinyelela ku-WiFi esheshayo engenamkhawulo. Ikhishi elihlome ngokuphelele, igumbi lesitolo elinamathiselwe .Igumbi lokulala elikhulu eliwumpetha elinombhede olingana nenkosi, nelinye igumbi lokulala elincane elinombhede wabantu abangashadile. Igumbi lokugezela eli-1 elinamathiselwe elinezindawo zokugeza amanzi ashisayo. 2 ovulandi ngaphambili nangemuva.
Izikrini zokuvikela omiyane zifakwe emafasiteleni nangaphezulu kweminyango.Kunikeziwe amanetha omiyane. Indlu ivulelwa izitebhisi eziholela ezansi ezakhiweni zikakhonkolo ezinendawo yokupaka.
Impahla ivikelekile ngonogada bemini nobusuku futhi ibiyelwe ngocingo oluvikelekile oluyizindonga.
Amafasitela nezicabha ezibheke kuvulandi zinezivikelo zokugqekeza.
Lesi sakhiwo simaphakathi ne-Bukoto ngakho-ke uzozwa umsindo othile womgwaqo emini.
Le ndawo iyifulethi e-Bukoto amamitha angama-200 ukusuka eklabhu yezwe yase-Kabira, ibanga lokuhamba ngezinyawo ukusuka ezithuthini zomphakathi. Ukuhamba imizuzu emi-5 ukusuka eklabhu yezwe laseKabira, izitolo nezindawo zokudlela, imizuzu eyi-15 uhamba ngezinyawo usuka e-Acacia mall. Izixhumanisi zokuhamba ezinhle kakhulu zokungena nokuphuma enkabeni yedolobha.
Izinhlobonhlobo zezindawo zokudlela, izimakethe, amabhange, imitholampilo, amakilabhu ezempilo konke kungaphakathi kwebanga elifushane lokuhamba ngezinyawo. Izakhamizi ikakhulukazi ziyizindawo zokuhlala ezisezingeni eliphakathi ezinezindawo zokuthengisa ezikhulayo.
Le ndawo isendaweni ephephile enabantu abanobungane. Isibalo esiphezulu sabantu ngabantu abangu-4. Umsingathi akahlali endaweni, kodwa uhlala eduze futhi utholakalela noma yimiphi imibuzo.
Impahla ivunyelwa yonke impahla enamanzi, i-inthanethi, igesi, ugesi, amathawula okulala nokuhlanza konke okuhlanganisiwe.
Ibungazwe ngu-Renske And Angella
Sihlala kwezinye izindawo zokuhlala futhi sitholakala ezivakashini uma kudingeka.
Umhlanzi wethu uzongena eyunithi ngokuvamile kabili ngesonto
Abasebenzi esizeni nabo bangafinyelelwa ngezidingo ezisheshayo